काठमाडाैँका यी २० वर्षीय युवकको मोबाइलमा ४६ युवतीको ‘नग्न’ भिडियोः कसरी पार्थे जालमा ? यसरी भयो पर्दाफास !हेर्नुहोस - Man Xune Kura
काठमाडाैँका यी २० वर्षीय युवकको मोबाइलमा ४६ युवतीको ‘नग्न’ भिडियोः कसरी पार्थे जालमा ? यसरी भयो पर्दाफास !हेर्नुहोस
खासमा दीक्षा जुन युवकबाट मा नसिक या तनासँगै यौ न शो षणमा परेकी थिइन्, ती युवकलाई दीक्षाले चिनेकी थिइनन् । युवकले आफ्नो इन्स्टाग्राम आइडीबाट दीक्षालाई म्यासेज पठाएका थिए । सोही म्यासेजको रिप्लाई गर्दा दीक्षाले लामो समय मा नसिक या तनासँगै यौ न शो षणको शि कार बन्नुपरेको थियो ।एकदिन खै किन हो उनलाई उक्त म्यासेजको रिप्लाई गर्न मन लाग्यो । उनले हेल्लो भनेर म्यासेज पठाइन्
सामान्य औपचारिकताको कुराकानी चलिरहेकै समयमा एक्कासि युवकले दीक्षालाई अ श्लील गा लीसहितको म्यासेज पठाए। न चिनेको, न जानेको । अज्ञात व्यक्तिले गा लीग लौज गर्दै म्यासेज पठाएपछि दीक्षालाई पनि रिस उठ्यो । उनले पनि युवकलाई अ श्लील गाली गर्दै म्यासेज पठाइन् । केही समय दुवैबीच अ श्लील गा लीगलौज भयो ।नि लम्बित समेत हुन सक्ने चिन्ता उनलाई भयो । त्यसपछि दीक्षाले ती युवकलाई त्यस्तो नगरी दिन अनुनय विनय गर्न थालिन्
युवकले दीक्षाको त्यही डरलाई आफ्नो ह तियार बनाए । अनि दीक्षासँग ब्ल्या-कमेल गर्न थाले । ‘तिमीले पठाएको म्यासेज तिम्रो परिवार र प्रिन्सिपल लगायतलाई नपठाउने भए तिम्रो स्त नको ना ङ्गो फोटो पठाऊ’ भनेर युवकले ब्ल्या कमेल सुरु गर्‍यो । दीक्षाले युवकको प्रस्ताव अस्वीकार गरिन् ।दीक्षा बा ध्य भएर अनुहार नै आउने गरी आफ्नो शरीरको न ग्न फोटो पठाउन थालिन् ।
युवकको ध म्की अब परिवार र प्रिन्सिपलभन्दा माथि पो र्न सा इटमा हालिदिन्छु भन्नेसम्मको आउन थाल्यो । युवकले दीक्षाको अ श्लील भिडियो पो र्न साइटमा अपलोड गरिसकेको भन्दै त्यसको स्क्रिनसट पनि दीक्षालाई पठाउन थाल्यो र भेट्न नआए त्यो पब्लिक गरिदिने भन्दै ध म्की दिन थाल्यो । तत्काल भेट्न आउन र आफूसँग समय बिताउन ध म्की दिन थालेपछि दीक्षा दिनानुदिन तनावमा पुगिन् ।महानगरपालिका १२, भोटेवहाल घर भएको २० वर्षीय लव खड्गी । पेसाले लव एक ट्याटु आर्टिस्ट थिए
त्यसपछि बल्ल दीक्षाले आफू समस्यामा परेको र युवकले बारम्बार ध म्की दिँदै मा नसिक या तना र यौ न शो षण गरिरहेको बारे भाउजूलाई बताइन् । भाउजूले दीक्षालाई सम्झाउँदै तिमीलाई कुनै समस्या हुँदैन, त्यो व्यक्तिले तिमीलाई कुनै क्षति पुराउन सक्दैन हिँड उजुरी गरौँ र युवकलाई प क्राउ गरौँ भनेपछि दीक्षा तयार भइन् । बुवा, दाजु आदि कसैलाई पनि जानकारी नदिने शर्तमा दीक्षा भाउजूसँगै भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरोमा पुगिन् । अनि घटनाबारे महिला प्रहरीसँग बेलिबिस्तार लगाउँदै आफू अत्यन्तै तनावमा पुगेको र डि प्रेसनको शि कार भइसकेको बताइन् ।सादा पोसाकका प्रहरीसँगै युवकलाई भेट्न वसन्तपुर पुगिन् । केही समयपछि युवक पनि त्यहीँ आइपुग्यो
महिला प्रहरीले दीक्षालाई सम्झाउँदै त्यस्तो केही नहुने र युवकलाई पक्राउ गर्न सकिए ती प्रमाण सबै नष्ट गराउन सकिने भन्दै सम्झाएपछि दीक्षा केही सम्हालिइन् र ब्युरोमा उजुरी दिइन् । प्रहरीले फेरि दीक्षालाई उक्त युवकसँग कुराकानी गर्न र भेट्न आउन तयार रहेको बारे बताउन भने । दीक्षाले युवकको मोबाइल नम्बर पनि मागिन्, तर युवकले मोबाइल नम्बर दिन मानेन । बरु आफूले तिमीलाई चिन्ने भएको कारण वसन्तपुरको कुमारी घर छेउमा आउन भन्यो । दीक्षाले प्रहरीसँगको समन्वयमा उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिन् र मङ्सिर २ गते दीक्षा सादा पोसाकका प्रहरीसँगै युवकलाई भेट्न वसन्तपुर पुगिन्। केही समयपछि युवक पनि त्यहीँ आइपुग्यो र आफू त्यही युवक भएको बताएसँगै प्रहरीले युवकलाई प क्राउ गर्‍यो ।
Previous: यातायात कार्यालय गुर्जुधाराबाट सोह्र विचौलिया पक्राउ
Next: राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार छनोटको जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई